Wararka - Xirmada dab-damiska "Ballaarinta" waxay keeneysaa difaac sare oo ka-hortagga dabka
Sanadihii la soo dhaafay, gobolku wuxuu feejignaan dheeri ah u siiyey ka hortagga dabka ee mashaariicda dhismaha, tiro aad u badan oo ah qalabka ka hortagga dabka ayaa lagu dabaqay dhismaha injineernimada. Bacda D--3-cd01 dabka-celisa waa nooc cusub oo ah dab-caddeyn taageeraya diidmada ay soo saartay shirkadda Weicheng iyadoo la raacayo heerka cusub ee qaran ee gb23864-2009 (qalabka dabka lagu xiro). Qaabka db-a3-cd01 bacda dabka celisa waa sida barkin yar, lakabka kore wuxuu ka samaysan yahay maro fiber dhalada lagu daaweeyay, gudahana waxaa ka buuxa isku dar ah waxyaabo aan dabiici ahayn oo aan guban karin iyo waxyaabo gaar ah oo lagu daro. Shaygu waa mid aan sun lahayn, dhadhan lahayn, daxal la'aan, biyo u adkaysta, saliid u adkaysta, Hygrothermal u adkaysta, barafow-dhalaalida wareegga u adkaysta iyo sifooyinka ballaarinta wanaagsan. Waa la kala qaadi karaa oo dib ayaa loo isticmaali karaa marka la doono. Waxaa laga samayn karaa qaabab kala duwan oo ah gidaar-dhiska iyo lakabka dabka-dabka laga qaadi karo iyadoo loo eegayo shuruudaha kala duwan ee isticmaalayaasha, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu xiro godadka u baahan daaweynta dab-caddaynta ah Markaad la kulanto dabka, qalabka ku jira xirmada ka hortagga dabka waa kululaan oo waa la ballaariyaa si ay u noqdaan bakeeriga malab, sameysma lakab adag oo adag si loo gaaro ka hortagga dabka iyo kuleylka kuleylka, oo si wax ku ool ah u xakameynaya dabka ka dhex jira aagga. Marka dhumucda fiiladu ay gaarto 240mm, xadka u adkaysiga dabka wuxuu gaari karaa in ka badan 180min.